अबैध भवन बनाउने नाममा करोडौं असुल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ | My News Nepal
अबैध भवन बनाउने नाममा करोडौं असुल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रलाई देखाएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीहरुसँग मोटो रकम उठाएको प्रमाण फेला परेको छ । भवन बनाउने भन्दै संघले विभागको पत्रमार्फत आतंक मच्चाएको हो । पैसा उठाउने संघको अभियानलाई विभागले पनि साथ दिएको छ । सेटिङ मिलाएर संघको योजना अनुसार विभागले पत्र पठाएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रका आधारमा संघले ९ सय १६ जना व्यवसायीहरुसँग चार करोड ५८ लाख रकम उठाउने योजना बनाएको छ । संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले यो रकमबाट श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, श्रम राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक राजकुमार श्रेष्ठलाई केही रकम दिनु पर्ने भन्दै व्यवसायीहरुसँग असुलिरहेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने,‘नक्सा नै पास नभएको भवन बनाउने बहानामा यति ठूलो रकम व्यवसायीसँग असुल गरिँदै छ ।
मन्त्री र महानिर्देशकको मिलोमतोमा जाँदाजाँदै पैसा उठाउने प्रपञ्च रचिएको हो ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ६/६ महिनामा विभागमा बुझाउनु पर्ने अध्यावधिक रिपोर्ट अब विभागमा बुझाउन पाइने छैन । संघमा बुझाउनु पर्नेछ । विभागले यो निर्णय गर्नुमा आन्तरिक लेनदेनको ठूलो चलखेल भएको आरोप एक व्यवसायीले लगाए । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष गुरुङको मिलेमतोमा उक्त खेल रचिएको हो । अब कुनै व्यवसायीले संघमा रिपोर्ट बुझाउँदिन भन्न पाउने छैनन् । संघमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान सहितको पत्र विभागले पठाइसकेको छ ।
विभागको सोही पत्रलाई आधार बनाएर संघका अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायीहरुलाई परिपत्र गरेका छन् । विभागले आफूले बुझ्दै आएको व्यवसायीहरुको रिपोर्ट अकस्मात संघमार्फत बुझ्ने निर्णय किन गरेको भन्ने बारेमा अझैसम्म पनि कसैले बुझेका छैनन् । संघमार्फत रिपोर्ट बुझाउँदा व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्ने गुनासाहरु आएका छन् । त्यो गुनासो सुन्न विभाग र संघ तयार छैनन् । संघले ५१ हजार बुझाएको नगदी रसिद रिपोर्टसँगै नराख्ने हो भने कुनै पनि प्रकारको सिफारिस नदिने जनाएको छ । सरकारी नियमलाई मन्त्री, महानिर्देशक र सीमित व्यवासयीको हितमा प्रयोग हुनुलाई ठूलो रहस्यका रुपमा लिइएको छ ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले विभागको पत्र उल्लेख गरेर व्यवसायीहरुलाई परिपत्र गरी ५१ हजार नदिए संघमार्फत दिइने कुनै पनि प्रकारको सिफारिस नदिने चेतावनी दिएका छन् । भवन निर्माणमा व्यवसायीहरुको विमती छैन । तर, अध्यक्ष गुरुङले विभागको पत्र दुरुपयोग गरेर व्यवसायीहरुसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेकोमा विरोध शुरु भएको छ ।
एमाले निकट मानिने अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायीहरुसँग ५१ हजारका दरले रकम उठाएको स्वीकार गरेका छन् । ‘संघको भवन निर्माणका लागि व्यवसायीहरुसँग ५१ हजारका दरले पैसा उठाएको साँचो हो’, उनले भने । उनले तोकिए अनुसार पैसा नबुझाउने व्यवसायीलाई हदैसम्मको कारबाहीको चेतावनी समेत दिए । वैदेशिक रोजगार विभागले अर्कै उद्देश्यले पठाएको पत्रलाई आधार बनाएर तपाईले व्यवसायीहरुसँग ५१ हजारका दरले पैसा उठाउन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष गुरुङले भने,‘यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो । तपाईलाई किन भन्ने ? जे मन लाग्छ त्यो लेख्नुस् ।’
नक्सापास नै नभएको भवन बनाउन संघका अध्यक्ष गुरुङले किन ५१ हजारका दरले पैसा उठाएका हुन् ? बुझ्न नसकिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
यता, एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष हरि पाण्डेले पनि ५१ हजार रकम दिनै पर्ने भन्दै उर्दी जारी गरेका छन् ।
कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीहरुसँग ५१ हजारका दरले पैसा उठाउन लागेको निर्णयको विरोध गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले संघको भवन बनाउने विषयमा आफूहरुको कुनै पनि विमती नरहेको बताए । तर, संघले विभागको पत्र देखाएर व्यवसायीहरुलाई आतंक मच्चाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको विश्वसनियतामाथि प्रश्न
कर्मचारीहरुलाई हँसिलो मुहार भएर राष्ट्र सेवामा लाग्न मन्त्री पण्डितको आग्रह